169 အဘို့ရလဒ် spongebob
Patrick SpongeBob ကိုကယ်တင်
တောခွေးကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုကူညီကြကုန်အံ့, SpongeBob သိမ်းဆည်းရမိပြီးလှောင်အိမ်ထဲသို့သူ့ကိုကို bundle, ပက်ထရစ်နှင့်သိပြီးနောက်မိမိနှမ, အ SpongeBob ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့က, အတွေ့အကြုံအခက်အခဲကြီးတွေမကောင်းတဲ့ဝံပုလွေနယ်မြေထဲ ဝင်. ရှိမရှိ SpongeBob ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
3 မဖြစ်နိုင် SpongeBob မစ်ရှင်
သငျသညျ SpongeBob ဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? ဒီဂိမ်း SpongeBob မစ်ရှင် Impossible စီးရီးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Spogebob အားလုံးအဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်နှင့်ပက်ထရစ်နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကကယ်နှုတ်ကိုကူညီပါ။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, SpongeBob သူတို့ကိုသတင်းစာများပစ်ခြင်းငှါ, တေးသွားကိုမှမြှား key ကိုစာနယ်ဇင်း space bar ကိုအာဏာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်ဖို့သတင်းစာများပစ်ကူညီပက်ထရစ်၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူတစ်စာပို့သမားဖြစ်ပါတယ်။
အတူရကီ Patti - ဒါဟာမစ္စတာ Krabs နောက်ဆုံးပေါ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းစာရွက်ကာကွယ်ပေးရန် SpongeBob နှင့်ဂယ်ရီမှတက်ပဲ!
ဂြိုလ်သားငါးရေကူးဝတ်စုံနဲ့အောက်ကိုကျူးကျော်ခဲ့ကြအပေါင်းတို့နှင့်တကွအပင်ကိုစားကြသည်! သာသူတို့ကကမ္ဘာမြေနေ့ခဲ့သည်မသိ။ ထိုသို့ပေါက်!
SpongeBob ရဲ့သူ့ကိုပျံ Dutchman ရဲ့သင်္ဘောကိုပြန်ရကိုပြောပြရန်တစ်ဦးပုံပြင်တစ်ခုတစ္ဆေတယ်!
Cycle အပြိုင်အဆိုင်နယ်ချဲ့နေမှုကိုမှကြိုဆိုပါ၏! အချို့သော wacky ဇာတ်ကောင်အဖြစ်မျိုးနွယ်ကိုသင်ချန်ပီယံဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားအဖြစ်!